ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးများတကယ်ပဲကြောင့်အားလုံးဖူးနိုင်သလား?
…သို့မဟုတ်ယနေ့ရဲ့ "overachievers" သူတို့ဆက်ဆံရေးကိုဂရုမစိုက်ဘဲနေကြတယ်?
"သင်သည်တာရှည်သောလမ်းလာပါတယ်, ကလေး,"ဒီနေ့ရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးရေပန်းစားတဲ့စီးပွားဖြစ်ဤသို့ဖော်ပြ. ထိုအငါတို့သည်ရောက်ရှိလာပါပြီ!
တောင်မှကော်ပိုရိတ်အရီနာကွင်းတွင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှကော်ပိုရိတ်တက်လှေကားတက်ကြပြီ, မကြာခဏလူဖြစ်ကြ၏ကြောင်းဧရာဦးစီးဌာန၏ဘတ်ဂျက်နှင့်လက်အောက်ငယ်သားစီမံခန့်ခွဲခြင်း.
ကျွန်တော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟူသောအချက်ဤ Add, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေရှာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ရှိသည်. သီချင်းဆိုအုပ်စု၏စကားအတွက်, Destiny ရဲ့ကလေး, "ငါငါ့အပေါ်မှာမူတည်, ငါလိုလျှင်။ "
Bravo နှစ်ဦး! ဦးညွတ်လိုက်ပါ.
ကျွန်တော်တို့ဝေးလွန်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကို boardroom လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုသောအရည်အသွေးများများစွာကိုအသိအမှတ်မပြုရန်ပျက်ကွက်, အိပ်ခန်းထဲမှာထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ပါတယ်. မင်္ဂလာပါ?!
သို့မဟုတ်, ဒေါက်တာ၏စကားအတွက်. ဖီးလ်, "ဘယ်လို workin င်’ ကို 'များအတွက်?"
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခါတရံတွင်သတိမရဘဲကျနော်တို့ရဲ့ယောက်ျား emasculate ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်လေးဘုံအခြေအနေရှိပါတယ်.
က "က IT ငါသွားရာလမ်းဆိုရင် OR အဝေးပြေးလမ်းမရဲ့" စိတ်ကျန်းမာရေး— သေချာတာပေါ့, အလုပ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအခွင့်အာဏာရာထူးကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းတော်မူသောသူတို့၏အလိုဆန္ဒများကျွန်တော်တို့၏ dictate နှင့်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆပ်ဖို့ခွင့်ပြု. ဒါပေမဲ့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုကွဲပြားခြားနားပါသည်. ကိုယ်တော်သည်အဘယ်မှာနေနှစ်ဖက်စလုံးမိတ်ဖက်ဖြစ်မဟုတ်ပေမဲ့’ လိုအပ်ချက်နှင့်ခံစားချက်များ accommodated နေကြတယ်, မိဘအုပ်ထိန်းမှုသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်မအခန်းကဏ္ဍ.
အမွေမြေကိုအစွဲအလန်း—ဘုရားသခင်သည်မိမိရှိတယ်သောသူငယ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ. အကြှနျုပျတို့ကိုအချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဘေးထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသီးသန့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသိစေရန်ပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှမ, အထူးသဖြင့်ငြင်းခုံ၏အရှိန်. "ကျွန်တော်၏အိမ်, ငါ့ကား, ငါ့ငွေကို။ "ကျနော့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို!
"ကျနော်မိန်းမ ME တို့အသံဗလံ "syndrome ကိုကြား AM—ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေရှာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကောင်းစွာဖြစ်လျက်ရှိသည်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကနေ, ဘဝ၏နေ့စဉ်ညီမျှခြင်း၏ထွက် X ကိုယောက်ျားတတ်နိုင်သမျှမွေးဖွားမှုနှင့်ကလေးမွေးစားခြင်းကို options များမှ, ကျွန်တော်တို့လူတချို့ကိုငါတို့စကားကိုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် Dispenser သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးကမ်းကြသည်.
အသေးစားကိစ္စရပ်များအပေါ် BIG ရပ်တည်—စကားများနှင့်အတူစစ်ပွဲများကိုဆင်နွှဲအမျိုးသမီးတချို့ကိုအာဏာနှင့်အရေးပါမှုကိုတစ်ဦးခံစားချက်ပေးသည်, ပြောင်းလဲမှုပုန်ကန်သောခံနိုင်ရည်ယောက်ျားစွန့်ခွာနေစဉ်.
သို့သော်ဟန်ချက်မကြာခဏ သာ. ကောင်း၏.
သေချာတာပေါ့, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့တချိန်လုံး’ tab ကိုပေးဆောင်— အရာအနည်းငယ်ပေးခေါ် ယူ. နားလည်တဲ့အစ်မတွေကနေအလုပ်ခန့်အတူတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု9သို့ 5. နောက်ဆုံးတော့, Billy Dee ဝီလျံရုပ်ရှင် Mahogany အတွက်ဒိုင်ယာနာရော့စ်ပြောပြအဖြစ်, နည်းလမ်း nothin နှင့်အတူဝေမျှဖို့တစ်စုံတစ်ဦးမပါဘဲ "အောင်မြင်မှုကို ''!"